Home » သတင်း » Los Angeles မြို့ 2019: EditShare Cine ဂီယာကုန်စည်ပြပွဲမှာမီဒီယာ & Entertainment ကစက်မှုဝန်ကြီး Advanced အနိုင်ရရှိမှုက၎င်း၏နောက်ဆုံးဆုချီးမြှင့်ပြ
Los Angeles မြို့ 2019: EditShare Cine ဂီယာကုန်စည်ပြပွဲမှာမီဒီယာ & Entertainment ကစက်မှုဝန်ကြီး Advanced အနိုင်ရရှိမှုက၎င်း၏နောက်ဆုံးဆုချီးမြှင့်ပြ
Boston, MA — May 14, 2019 — EditShare®,atechnology leader in intelligent scale-out storage, media asset management (MAM) and automated quality control (AQC), will be showcasing its latest advancements for the Media & Entertainment industry at the Cine Gear Expo: Los Angeles မြို့ 2019, the premiere event for the technology, entertainment and media industry. Attendees will have the opportunity to see first hand the multi award winning EFS storage platforms and Flow media asset management, now featuring new Emmy award winning multicam and remote editing capabilities and support foraraft of new storage vendors.
Also on display will be the IMF-ready QScan, which provides HDR compliance verification capabilities to Dolby Vision certified post-production facilities, and HelmutFX,aback-office solution that provides Adobe Premiere Pro CC projects and users management via EditShare စီးဆင်းမှု။
အဆိုပါဖြေရှင်းချက်အပေါ်ပြသပါလိမ့်မည် Booth #80 (on Financial Street near hospitality) on May 31st and June 1st at Cine Gear Expo: Los Angeles မြို့ 2019, The Studios at Paramount, ဟောလိဝုဒ်,, CA.
တက်ရောက်တစ်ဦးနှင့်အတူပုဂ္ဂလိကသရုပ်ပြစာအုပ်ဆိုင်နိုင်ပါတယ် EditShare workflow expert to see the solutions by contacting [အီးမေးလျ protected] or stopping by the booth.
အေျကာင္းအရာ EditShare Media Solutions at the Cine Gear Expo:
EditShare EFS နဲ - မီဒီယာ & Entertainment က၏အနာဂတျအတှကျဒီဇိုင်းသိုလှောင်
EditShare'' s ကိုအရည်မီဒီယာဂေဟစနစ်အရောင်ငယ်များအတွက်လက်ဖက်ရည်ဖြေရှင်းနည်းများနှင့်အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှု applications များအပေါင်းတို့, စက်မှုလုပ်ငန်းစံဗွီဒီယိုနဲ့အသံတည်းဖြတ်စနစ်များကိုပေါင်းစပ်ထားတဲ့ပွင့်လင်း platform ပေါ်တွင်မီဒီယာများ၏ဖွဲ့စည်း access ကိုမှတဆင့်အကြောင်းအရာနှင့်အတွေးအခေါ်များ၏ခွဲဝေမှုနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်။ သူ့ရဲ့ flagship လုပ်ငန်း EditShare EFS နဲသိုလှောင်မှုထွက်စကေး ဖြေရှင်းချက်မီဒီယာဝေမျှနှင့်ဌာနဆိုင်ရာတလွှားပူးပေါင်းဘို့, က်ဘ်ဆိုက်များကိုဖြတ်ပြီး, နှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းပါဝင်သော tools များနှင့်အတူတစ်ပြိုင်တည်းအသုံးပြုသူများအရာပေါင်းများစွာ supporting, အကြီးစားမီဒီယာအဖွဲ့အစည်းများအဘို့အဖွံ့ဖြိုးပြီးဖြစ်ပါတယ်။
ပြအပြင် EditShare'' s ကိုပေါင်းစုံဆုတက်ရောက်ကိုလည်းတွေ့မြင်နိုင်သည်, EFS နဲသိုလှောင်မှုပလက်ဖောင်းအနိုင်ရ EditShare'' s ကိုယင်း၏ EFS နဲစာရင်းစစ်နည်းပညာ, ဖြန့်ဝေဖို့စတင်ဖွဲ့စည်းမှသင်၏မီဒီယာ, စီမံခန့်ခွဲစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်လုံခြုံမှထုတ်လုပ်ထားတဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့တစ်ခုတည်းသော Real-time စာရင်းစစ်ပလက်ဖောင်းမှနောက်ဆုံးပေါ်တိုးတက်မှု။ EFS နဲစာရင်းစစ်အားလုံးဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုခြေရာခံစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်ဖိုင်တစ်ဖိုင်ကူးယူ, ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းနှင့်စီမံကိန်းအတွင်းမဆိုအကြောင်းအရာဖျက်မှုအပါအဝင်၎င်း၏ဘဝသံသရာတစ်လျှောက်လုံးကိုယူသောဒစ်ဂျစ်တယ် footprint ကိုဖမ်းယူ။
အိမ်မှာနောက်ကွယ်မှဆန်းသစ်ပါဝါမောင်းနှင် EditShare'' s ကို EFS နဲစာရင်းစစ်ဖြေရှင်းချက်သည်စီးပွားဖြစ်နည်းပညာရုံဂုဏ်သတင်းကိုလက်ခံရရှိ တစ်နှစ်တာဆုကို၏ 2019 NAB Show ကိုကုန်ပစ္စည်း ပထမဦးဆုံးဖြစ်ခြင်းများအတွက်သိုလှောင်ကဏ္ဍ အချိန်မှန် မီဒီယာနှင့်အ Entertainment ကစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ရည်ရွယ်ချက်-built က Shared သိုလှောင်မှုဖိုင်စာရင်းစစ်ဖြေရှင်းချက်။ IABM, အသံလွှင့် & မီဒီယာနည်းပညာပေးသွင်းများအတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအစည်းအရုံး, "အကောင်းဆုံးသိုလှောင်" ထုတ်ကုန်ဆုနှင့်အတူ IBC 2018 မှာသိုလှောင်မှုအကြောင်းအရာလုံခြုံရေးအတွက်ဂိမ်းတစ်ခု changer အဖြစ် EFS နဲစာရင်းစစ်အသိအမှတ်ပြုခဲ့ကြသည်။
စီးဆင်းမှု 2019 - အဝေးမှတည်းဖြတ် Workflows တီထွင်ဆန်းသစ်
EditShare မကြာသေးမီက Flow 2019 extension ကို3ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်ပြပါလိမ့်မည်။ ယင်း၏ဆော့ဖ်ဝဲကို-သတ်မှတ်ထားသောမီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုမှနောက်ဆုံးပေါ် update ကို (ပေးခဲ့သည်) ဖြေရှင်းချက်, ရှာဖွေခြေရာခံ retrieve, ပြင်ဆင်ရန်နှင့် On-ရဝုဏ်နဲ့ cloud-based သိုလှောင်မှုဖြေရှင်းချက်ကိုဖြတ်ပြီးမီဒီယာနှင့်မီဒီယာလုပ်ငန်းစဉ်များအလိုအလျောက်မှ embedded ထုတ်လုပ်မှု tools များနှင့်အတူမီဒီယာခွဲဝေမှုများနှင့်ပူးပေါင်းရိုးရှင်းစွာ။
စီးဆင်းမှု 2019 တိုးချဲ့မှု3လည်း Lightworks များအတွက်တီထွင်သူဟာ Emmy ဆုရ multicam နည်းပညာထည့်သွင်းရန်တည်းဖြတ်ရေးလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုချဲ့ထွင်။
ဘုတ်အဖွဲ့ကိုဖြတ်ပြီးအဓိကစွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်မှုအပြင်, Flow 2019 extension ကို3ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သောစကေးတက်နှင့်အတူ Azure, Google S3, Wasabi နှင့် Backblaze ၎င်း၏ cloud-based ထောက်ခံမှုတိုးချဲ့နေချိန်မှာအသစ်ကသိုလှောင်မှုရောင်းချသူထောက်ပံ့ဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့် Workflows ချစကေး။ စီးဆင်းမှု 2019 extension ကို3လိုအပ်ဘယ်မှာထပ်တူပြုခြင်းကိုပြောင်းလဲတစ်ဦးချင်းပြောင်းလဲပုဒ်ရှိနိုငျကွောငျးတစျခုပေါင်းစပ်ပိုင်ဆိုင်မှုသို့သီးခြားဗီဒီယိုနှင့် Audio Clip အပါအဝင်အတူတကွမျိုးစုံကင်မရာများနှင့်ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ရန်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်လမ်းပေးထားပါတယ်။ အဆိုပါပိုင်ဆိုင်မှုထို့နောက် logged shared နှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာမျိုးစုံ Flow ပုံပြင် client များအကြားပင်ရိုးရှင်းပြီးက Shared တည်းဖြတ်ရေးဘို့ခွင့်ပြုသည့် Flow ပုံပြင်ကို client အတွင်းအားလုံးတည်းဖြတ်နိုင်ပါတယ်။
Flow 2019 တိုးချဲ့မှု3အတွက် MOS protocol ကိုထောက်ခံကြောင်းနှင့်အတူဂျာနယ်လစ်များ, နေရာသတ်မှတ်ချက်များဖန်တီးယာဉ်ပုံပြင်များနှင့်တယောက်ကိုတယောက်လျှောက်လွှာထဲကနေခုန်စရာမလိုဘဲခွင့်ပြုချက်နဲ့ဖြန့်ဖြူးဘို့ပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ သတင်းအကြောင်းအရာနှင့် sequence ကိုနေရာသတ်မှတ်ချက်များစီးဆင်းမှုပုံပြင် module အတွက် edited အဖြစ် NRCS ကနေတာဝန်ကျအပေါ်အခြေခံပြီး, သတင်းဗီဒီယိုအပိုင်းများကိုအလိုအလျှောက် Flow 2019 ဖန်တီးနေကြသည်အခါနောက်ဆုံးသည့် NRCS ဖို့တွန်းအားပေး။ စီးဆင်းမှု 2019 အလိုအလျောက်သတင်းကလစ်ဖြန့်ဖြူးဘို့အဆင်သင့်ကြောင်း NRCS သတိပေး။
EditShare Basic, Advanced and Enterprise: စီးဆင်းမှု 2019 သုံး packages များအတွက်ယနေ့ရရှိနိုင်ပါသည်။ Volume ကိုစျေးနှုန်းကိုလည်းရရှိနိုင်ပါသည်။ မှာအခမဲ့ 14 ရက်ကြာရုံးတင်စစ်ဆေးဒေါင်းလုပ်ခြင်းဖြင့်အသုံးပြုသူများနိုင်စမ်းသပ်-drive ကို Flow: my.editshare.com။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက, ခရီးစဉ် flow.editshare.com ။
QScan - IMF က-အဆငျသငျ့နှင့် Dolby Vision ၏ HDR ကိုလေးစားလိုက်နာခြင်းစမ်းသပ်ခြင်းများအတွက်ပံ့ပိုးမှု
QScan ရဲ့ကျယ်ပြန့်-အထိမော်ဒယ်ပူဇော်သက္ကာကိုအသုံးပြုသူများကအဆောက်အဦများနှင့်အားလုံးအရွယ်အစားနှင့်တောင်းဆိုချက်များကို၏ Workflows သို့အလိုအလျောက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုဖြစ်စဉ်များထည့်သွင်းခွင့်ပြု; ဒါ့အပြင်သူ့ရဲ့သစ်ကို IMF ကစွမ်းရည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအခွင့်အလမ်းများတံခါးများဖွင့်လှစ်။ အစဉ်အဆက်မျိုးစုံပလက်ဖောင်းကျော်ဘာသာစကားမျိုးစုံအတွက်ဖြန့်ဝေလျက်ရှိထက်ပိုမိုအကြောင်းအရာနှင့်အတူ, QScan အသုံးပြုသူများသည် encapsulated ဘာသာစကားနှင့်ဖြန့်ဖြူးအတွက်အပြောင်းအလဲနှင့်အတူတစျခုအစုအဝေးကိုဖန်တီးခွင့် IMF က Workflows ထောက်ခံပါတယ်။
EditShare QScan မော်ဒယ်များယခုတွင်လည်းမီဒီယာကျွမ်းကျင်သူတွေအတွက် IMF ကဆော့ဝဲအစုအဝေးရေးစပ်သီဖတ်နေ၏ရှုပ်ထွေး demystifying အသုံးပြုသူများကသူတို့ IMF က packages များမှာအမြင်အာရုံ "ထိပ်ဆုံး-Down" ကြည့်ပေးသည်အသစ်တစ်ခု node ကို-based IMF ကဒိုင်ခွက် sport ။
EditShare ထို့အပြင်ယခုယင်း၏ QScan ထုတ်ကုန်လိုင်းနှင့်အတူသစ်ကို HDR ကိုလိုက်နာမှုစိစစ်အတည်ပြုစွမ်းရည် Post-ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံများကျွမ်းကျင်လက်မှတ်ရ Dolby Vision ၏ထောက်ပံ့နေသည်။ QScan မှ unique, ရှိသမျှအရေးပါသောအသတင်းအချက်အလက်များပုံစံငယ်များနှင့်အတူတစ်ဦးအချိန်ဇယားတလျှောက်တွင်ပြသနေသည်။ ဒေတာဒီအမြင်အာရုံပျက်ပြားကြောင့်ရိုးရှင်းတဲ့အကြောင်းအရာအတွင်းမှာပြဿနာတွေပေါ်လာဤသို့ သာ. ကြီးမြတ်ထိရောက်မှုနဲ့အစောပိုင်းထုတ်လုပ်မှု / Post-ထုတ်လုပ်မှုနှင့်အတူမည်သည့်လိုက်နာမှုပေးပို့ပြဿနာများကိုဖြေရှင်းရန်စခွေငျးငှါအဘယ်အရပ်သည်အသုံးပြုသူများကိုသိရှိနိုင်ဖို့စေသည်။
တစ်ခုချင်းစီကို QScan ထုတ်ကုန်အပြည့်အဝ (ထောက်ခံနှင့် AMWA ကအတည်ပြုနေသည်အဆင့်မြင့်မီဒီယာလုပ်ငန်းအသွားအလာအစည်းအရုံး).
HelmutFX - ယခုမှတဆင့်ရရှိနိုင်သို့ပြန်သွားရန်-ရုံးဖြေရှင်းချက် EditShare ပြန်လည်ရောင်းချသူများ
HelmutFX, ထုတ်လွှင့်လုပ်ငန်းအသွားအလာကျွမ်းကျင်သူ MoovIT တစ်ဦးထံမှ Adobe Premiere Pro ကို CC ကိုစီမံကိန်းများနှင့်အသုံးပြုသူစီမံခန့်ခွဲမှုကျော-ရုံးဖြေရှင်းချက်ယခုမှတဆင့်ရရှိနိုင် EditShareကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း 's ပြန်လည်ရောင်းချသူများကွန်ယက်ကို။ HelmutFX စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစကေးကို Adobe ဖန်တီးမှုများထားရှိ၏စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုရိုးရှင်းစွာနှင့်အတူ Adobe က Workflows ပိုကောင်းစေပါတယ် EditShare မီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုပလက်ဖောင်းစီးဆင်းကြသည်။ HelmutFX မှာဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်: editshare.com/products/helmut-fx.
© 2019 EditShare LLC ။All rights reserved ။ EditShare®တစ်ဦးမှတ်ပုံတင်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ပါသည် EditShare.
Blackmagic ဒီဇိုင်းတိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းအသွားအလာ Capture ပွဲတော် Beauregard - သြဂုတ်လ 19, 2019
နွေရာသီ 2019 ရဲ့အကြီးမားဆုံးရုပ်ရှင်ပွဲတော်တပတ်ရစ် Blackmagic ဒီဇိုင်းဦးလွတ်မြောက် - သြဂုတ်လ 16, 2019
URSA Mini ကိုအပေါ်နယူးသြစတြေးလျသိပ္ပံ Fi ကိုရုပ်ရှင်ပွဲတော် Quanta Shot Pro နဲ့ DaVinci ဖြေရှင်းရန်နှင့်အတူအဆင့်အလိုက်သတ်မှတ်ထားသော - သြဂုတ်လ 15, 2019
2015 2016 NAB ပြရန် 2016 NAB Show ကိုယောဘသည်တရားမျှတသော 2016 NAB ပြရန်သတင်းများ ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး ထုတ်လွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ ထုတ်လွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်း ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း အသံလွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း CineGear cinegear la EditShare H264 / H265 HDR HDR / WCG HEVC HEVC / AVC စွဲငြိဖွယ်ရာ isovideo JCT-VC ကို NAB 2015 NAB 2016 NAB ပြရန် Show ကို 2016 NAB NAB ပြပွဲအလုပ်အကိုင်များ NAB16 nabshow ဆူညံသံလျော့ချခြင်း UHD / 4K / HD ကို viarte Warsaw ကို	2019-05-14
ယခင်: Pineapple Entertainment chooses Facilis Shared Storage for Collaborative Workflow
နောက်တစ်ခု: Hipica တီဗီ Daily သတင်းစာ, တိုက်ရိုက်အာဇာနည်ပြိုင်ပွဲ Programming Enhance မှ Envivo ပြန်ဖွင့်ရွေးချယ်